0 Wednesday April 08, 2020 - 11:21:58
Cudurka dilaaga ah ee Covid19 ayaa wali sii wada gummaadka uu ka geysanayo wadamada reergalbeedka gaar ahaan Yurub iyo America.
0 Tuesday April 07, 2020 - 11:58:40
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in markii ugu horraysay ay dad Itoobiyaan ah udhinteen cudurka dilaaga Carona Virus.
0 Tuesday April 07, 2020 - 09:56:23
0 Sunday April 05, 2020 - 16:35:17
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada dowladda mareykanka ay isaga bexeen mid kamida saldhigyadii ugu waaweyn ee ay ka sameysteen galbeedka wadankaasi.
0 Sunday April 05, 2020 - 15:02:37
Waxaa magaalada Al Qaahira ee caasimadda wadanka Masar cudurka Carona Virus ugu geeriyooday siyaasi caan ka ahaa wadanka Liibiya.
0 Saturday April 04, 2020 - 09:08:00
0 Thursday April 02, 2020 - 20:13:16
Cudurka Covid19 ayaa wali dhimasho saf mareen ah ka geysanaya inta badan wadamada qaaradda Yurub iyo Mareykanka illaa iyo hadda waxaa lala'yahay daawo cudurkan lagula tacaalo.
0 Thursday April 02, 2020 - 13:50:18
0 Wednesday April 01, 2020 - 12:32:36
0 Monday March 30, 2020 - 08:55:59
0 Sunday March 29, 2020 - 08:17:21
Cudurka Carona Virus ayaa wali sii wada dadka uu ku laynayo daafaha caalamka, wararka ka imaanaya wadanka Talyaaniga ayaa sheegaya in dadka udhintay Carona ay kor udhaafeen Toban kun oo ruux.
0 Saturday March 28, 2020 - 07:07:56
0 Wednesday March 25, 2020 - 11:03:42
0 Wednesday March 25, 2020 - 09:56:11
0 Tuesday March 24, 2020 - 11:12:36
Wararka ka imaanaya wadanka Sweden ee qaaradda Yurub ayaa sheegaya in dadkii ugu badnaa oo Soomaali ah mar qura ugu dhinteen cudurka dilaaga ah ee Carona Virus.
0 Monday March 23, 2020 - 07:17:40
0 Monday March 23, 2020 - 07:06:36
Mas'uulkii ugu horreeyay oo katirsan dowladda Masar ayaa u dhintay cudurka dilaaga ah ee Carona Virus kaasi oo si aan horay loo arag ugu faafaya qaaradda Afrika.
0 Saturday March 21, 2020 - 10:11:08
0 Thursday March 19, 2020 - 11:54:21
0 Thursday March 19, 2020 - 10:27:32
0 Thursday March 19, 2020 - 08:54:10
0 Tuesday March 17, 2020 - 13:39:19
0 Tuesday March 17, 2020 - 08:33:22
0 Monday March 16, 2020 - 08:42:22
Wasaaradda caafimaadka dalka Talyaaniga ayaa ku dhawaaqday in dadkii ugu badnaa ay hal mar u dhinteen cudurka dilaaga ah ee Carona Virus.
0 Saturday March 14, 2020 - 17:56:29
inta badan dowladaha caalamka ayaa ku dhawaaqay in ay qaadayaan olole ay uga feejignaanayaan halista cudurka dilaaga ah ee Carona Virus.